Ngaphansi kwaziphi izingubo ezihambisana nezibopho zama-ankle ezivulekile
Ama-Botillon, okuyizinkathi ezimbalwa ezithandwa kakhulu phakathi kwabesifazane, amelela uhlobo lokushintsha phakathi kwezikhumba nezicathulo. I-feminine engavamile, enezinwele ezimhlophe futhi ehlanganisa amathole, ayethulwa ngezindlela ezahlukene nezindlela ezahlukene.
Abaqambi njengenye yezitayela ezifanele kakhulu kulo nyaka banikeza amabhuzu avulekile. Ekuboneni kokuqala, kungase kubonakale sengathi isinqumo esinjalo siyinkohliso kakhulu. Kodwa ngokuhlolwa okuningiliziwe nokuningiliziwe, uyaqonda ukuthi amabhuzu e-ankle anezinzwane ezivulekile akuyona nje inhle kakhulu, kepha impela iyasebenza futhi isitayela.
Naphezu kokuthandwa kwalezi zicathulo ezincane, ngaphambi kokuzithengela, kufanele kuqala kuqala ukucacisa ukuthi lolu hlobo lwezicathulo luzobukeka kanjani futhi ngokushesha unqume ukuthi yiziphi izingubo ezihambisana nezibopho ezivulekile. Uma ungenalo umnikazi wemilenze efanele, usathanda ukufaka isikhwama esifushane, kufanele ube nesilondolozi esengeziwe futhi kumashalofu ezitolo kungcono ukulalela amabhuzu aphezulu.
Vula amabhuzu, njengezicathulo ezinempumu evulekile, yizinsikazi ngokuphelele kanye ne-flirty encane. Ezikhathini ezinjalo ungabheka nje emangalisa. Kodwa ukuze uzuze umphumela omuhle, udinga ukuqonda ngokucacile uhlobo luni lwezingubo ezihambisana nezibopho ezivulekile. Futhi lokhu akulula kakhulu njengoba kungase kubonakale ekuboneni kuqala: ngezikhumba ezinjalo kubalulekile ukuba ukwazi ukuhlanganisa ngokufanele ukusika, ubude nokuthungwa kwendwangu.
Ngakho-ke, enye yezinto ezinhle kunazo zonke ze-wardrobe yile skirt. Ngezikhumba zama-ankle zibukeka zihle kakhulu futhi iziketi zifike phakathi kwamadolo (futhi, uma imilenze ikuvumela ukuba uvele kulolu hlobo). Vula amabhuzu ezinkantshi afane nezikhithithi ezithwele, amabhulukwe amade kanye nezigqoko zokude. Kodwa izingubo ezinjengalezi, njengeziketi kanye nama-breeches ngaphansi kwamadolo - hhayi abangane abaphumelele kakhulu bezinyawo zezinyawo. Kodwa, futhi, kuncike kakhulu kumuntu. Abanikazi abancane bemilenze ende yefomu engacacile bangakwazi ukuhlanganisa izinhlanganisela ezinesibindi, bonke abanye bazophoqelelwa ukuba bakhethe ikhabethe, bebheka ukungaphumeleli kwesimo sabo.
Ngokuqondene nezinto, izindwangu zemidwebo ehlukahlukene zifanelana nezibhuzu, ezifana nokuhlanganiswa kwe-satin enezikhumba ze-matte, ukotini kanye noboya be-latex, njll.
Futhi enye inkinga edala ukungqubuzana okuningi - kungenzeka yini ukugqoka amabhuzu avulekile nge-pantyhose. Ukubona kwendodakazi encane ehamba ngezinyawo ezimhlophe ezivulekile ezimhlophe, egqoke i-pantyhose emnyama, okungenani, izobangela ukwesatshiswa kwabaningi besifazane bemfashini. Kodwa lokhu akusho ukuthi izikhumba ze-ankle ezinezinzwane ezivulekile kanye ne-pantyhose zizinto ezingahambisani ngokuphelele. Ngokuphambene nalokho, abaklami bezwe abahamba phambili emaqoqweni abo bahlanganisa ngokuzihlanganisa lolu hlobo lwezicathulo nge-pantyhose, kodwa ... kuphela ngamaphethini anhle kakhulu.
Nokho, kule nguqulo kubalulekile ukwazi isilinganiso. Uma uthatha isinqumo sokuzithenga izibopho zama-ankle ehlobo, hhayi okwakhiwa kwentwasahlobo, futhi ukhethe ama-botilion avulekile kakhulu ngezinsimbi, ukusika okuhlobisa noma ukugqoka, okungukuthi, okufana nezicathulo ezinezinyosi ezivaliwe, khona-ke i-pantyhose kangcono lapha izocaca ngokucacile. Lezi zicathulo zigqoke ngezinyawo (kodwa asikhohlwa ukuthi imilenze kuphela ehlanjululwe kahle nge-pedicure ehle kakhulu ifaneleka izikhumba ze-chic), i-trousers noma i-jeans encishisiwe ikhethwayo, okungcono nge-breeches, noma i-leggings.
Izikhumba ze-Ankle ziyizicathulo ezingavamile, ezikhululekile nezesitayela. Baya kubaningi futhi bangabheka okuhle kokubili phansi kwentombazane encane, futhi kummeleli wesizukulwane esidala. Into esemqoka - yonke imithwalo yemfanelo yokufinyelela hhayi kuphela ukukhethwa kwezibhokisi zezinyawo, kodwa futhi ukhethe ngokucophelela ikhabethe elifanele.
Izitayela zangempela emhlabeni wezicathulo zabesifazane
Ukuphakama ukuphakama - kulula!
Umlando wesifuba: ukuqoqwa kwezicathulo Christian Louboutin The Remix 2017
Amabhuzu afaka imfashini nokuthi yini okufanele uwagqoke?
I-Rolls nehh kanye noshizi
Izizathu Ezinhlanu Zokudla Okungalungile
I-Decoupage yabaqalekisi isinyathelo ngesinyathelo ngezithombe
Amaski ebuso obuhle emakhaya - zokupheka kuzo zonke izinhlobo zesikhumba
Imfundo yenhloso: imithetho emihlanu yokuxhumana nengane
Inkukhu ye-chicken nemifino
Izinyathelo zokuphepha ezibonakalayo
Amabha "Twix" (Twix)
I-Souvenir ne-logo njengesipho